The anwụrụ ọkụ. Kedu ihe ọ bụ, olee otu esi akpụ ya na kedị ahụike ọ nwere? Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ dị mfe ụfọdụ ihe gbasara ihu igwe na-agbagọrịrị n’etiti onwe ha n’ihi myirịta na njirimara ha na ibe ha nwere. Dị ka ihe atụ, a na-ejikarị alụlụụ, alụlụ, na anwuru oku. Taa, anyị ga-ekwu maka ihe haze bụ, etu o si akpụ na ihe ọ na-emetụta na ndụ anyị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere haze ma mụta ịmata ọdịiche dị na ya na ihe ndị ọzọ yiri ya, nke a bụ ọkwa gị.
1 Kedu ihe haze
2 Esemokwu dị n'etiti anụ ọhịa na ihe ndị ọzọ
3 Ofdị haze
4 Ọnọdụ ahụike
Kedu ihe haze
Haze bụ ihe gbasara ihu igwe na-eme na mbara igwe. Ihe njiri mara ya bụ na o nwere nnukwu uzuzu na aja. N'ihi ya, ọ na-ebelata ọhụhụ ka igwe ojii na-eme. Na nkwusioru anyị nwere ike ịchọta ntụ na ụrọ ọbụna. Nchịkọta dị elu nke ihe ndị a na-eme ka ọhụhụ ghara ịdị, mana ọ nwekwara ike ibutere ụmụ mmadụ nsogbu ndị ọzọ nke igwe ojii na-adịghị.
Igwe ojii nke ikuku haze na-ewe nwere ike ịdị ize ndụ maka ndị mmadụ na-eje ije mgbe ihe ahụ na-eme na ndị ọkwọ ụgbọala.
Esemokwu dị n'etiti anụ ọhịa na ihe ndị ọzọ
Anyị ga-ekwu maka isi ihe ịtụnanya dị ka anwụrụ ọkụ na nke na - agbagha mgbe niile. Ihe mbu nke bu foogu. Fog na-ewere ọnọdụ n'ihi odide nke ihe ndị dị na mmiri na gburugburu ebe obibi n'ihi obere okpomọkụ. Igwe ojii a n'igwe nkịtị nwere ike ibute mmetụta dị iche iche na ịnya ụgbọ ala n'ihi ọhụhụ belatara. Otú ọ dị, Ọ naghị akpata mmetụta ọ bụla na ahụ ike ma ọ bụrụ na ị na-eje ije na alụlụụ. Naanị, iru mmiri dị na gburugburu ebe obibi dị elu.
Otu a ka haze. Ihe omume a abụghị sọsọ nke nwere pasent ọzọ nke mmiri juputara na ya na ọ na-enwekarị na mpaghara oke osimiri. N'okwu a, ihe ize ndụ na-elekwasị anya karị maka ịkwọ ụgbọala n'ụsọ oké osimiri na gburugburu ma ọ bụ karịa n'ụsọ oké osimiri na igodo. Ọzọkwa, anyị ahụghị mmetụta ọ bụla na-adịghị mma na ahụike nke ndị na-agagharị n'okporo ụzọ rụrụ arụ.
Ihe dị iche n’etiti haze na ihe ndị ọzọ na - emegharị ya anya bụ n’ihi ihe mejupụtara ya na - ebelata ịhụ ụzọ. Mgbe ha na alụlụ na igwe ojii, ha bụ mmiri mmiri mejupụtara na - eme ka igwe ojii, na anwụrụ ọkụ ha bụ ntụ ntụ, aja, ntụ na ụrọ.
E nwere ụdị haze dị iche iche dabere na nguzobe na njirimara. Anyị nwere ihe ndị a:
Ụdị A. Ọ bụ ụdị nke "eke" haze, yabụ ikwu okwu, nke a na-akpụ site na ntụ, aja na nnu dị na gburugburu ebe obibi. Dị ka ọ dị, ọ bụrụ na nnu dị na mmiri dị elu, anyị nọ n'akụkụ ala n'ụsọ osimiri ma ikuku na-efe, enwere ike ịnwụ. A na-emepụta oke ikuku a site na ibuga ájá, uzuzu na nnu dị n'ime mmiri ahụ gaa n'ime ime obodo ahụ. Ta ihe ndị a dị na ikuku na-ebelata ọhụhụ na ọ nwere ike ịdị egwu maka ahụike gị ka iku ume ọtụtụ ikuku na ikuku n'ụzọ na-aga n'ihu.
Dị B. Nke a bụ ihe etolite na mpaghara ụfọdụ akọwapụtara nke ọma. O nwere ike ime mgbe mmetọ ikuku na obodo dị elu karịa n'ihi nkwụsi ike nke ikuku na enweghị ikuku. N'okwu a, a na-echekwa ikuku gas site na ọkpọkọ ọkụ na-ekpo ọkụ n'obodo ndị mepere emepe, na-akpata ezigbo ikuku ikuku. Haze nwekwara ike iburu anwụrụ ọkụ si n'oké ọhịa. Ikuku ume nke ihe ndị a dị ize ndụ karịa ahụike karịa ụdị A.
Na Spain, anwụrụ ọkụ na-adịkarị n'oge oyi. Karịsịa, anyị na-ahụ ya n'ime agwaetiti Canary, kpọmkwem na Lanzarote na Fuerteventura. Ihe omume a na - ewere ọnọdụ n'ihi ụzọ ikuku na - efe. Mgbe ọ fụrụ n'akụkụ ebe ọdịda anyanwụ, ọ na-ebu uzuzu niile si n'ọzara Sahara banye n'ime agwaetiti, na-eme ka visibiliti belatara nke ukwuu ma dịkwa egwu iku ume. Na mgbakwunye, ụgbọ ala ahụ juputara na apịtị.
Anyị na-eburu akụkọ ahụ dum na-ekwupụta na ọ bụ adịghị mma maka ahụike. Mana gịnị mere?. Mmetụta nke anwụrụ ọkụ nwere ihe abụọ. Nke mbụ bụ kpọmkwem na nke ọzọ adịghị adị. Akụkụ na-apụtaghị nke ọma na-ebelata ọhụụ. Nke a nwere ike ibute ihe mberede okporo ụzọ na nsogbu ndị ọzọ na-esite na nsogbu nke ịhụ ihe karịrị akarị. Mbelata ọhụhụ adịghị emetụta ahụ, ma nsonaazụ nke a nwere ike iweta.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere nsonazụ na nsonaazụ na-eduga na ya. Nnukwu uzuzu nke ájá na ihe ndị ọzọ na-eme ka o sie ike iku ume ma na-akpasu ndi mucous membranes. Otu n’ime ihe na - akpata ya bụ ikuchi ya, anya ya na ụkwara na-aga n’ihu. Ọ bụrụ na haze nwere oke ụba, ọ ga-ekwe omume na, ọbụlagodi ụbọchị ole na ole, nsogbu nke bronchospasm nwere ike ịpụta. Nke a bụ, nnukwu nsogbu iku ume, ụkwara ume ọkụ, na mgbu obi. Na ụfọdụ ndị mmadụ ọ na - ebute nsogbu nchegbu.
Iji kpochapụ nsonaazụ ahụike nke haze, ọ dị mkpa ịgbaso amụma ihu igwe ma kọọ ọdịdị nke ihe a. Fọdụ ndụmọdụ dị mkpa ị ga-agbaso mgbe oke ikuku dị bụ imechi ọnụ ụzọ na windo, hapụ ụlọ ka obere ka o kwere mee, jiri nkpuchi iku ume, zere mmega ahụ n'èzí, drinkụọ mmiri dị ukwuu iji zere hydration, wdg.
Kpachara anya ọ bụla pere mpe. Ikekwe ịdọ aka ná ntị kachasị mkpa abụghị ịhapụ ụlọ ma ọ bụrụhaala na ọ dịghị mkpa. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ekwe nkwa na enweghị akụkụ ọ bụla n'ime gburugburu a ga-eku ume.
Nọmalị haze na-alaghachi azụ mgbe enwere mgbanwe na igwe ikuku, na ntụ ikuku ma ọ bụ ụfọdụ mmemme ọdịda. Omume ọ bụla na-eme ka ihe ndị ahụ na-agbasasị ga-enyere aka kpochapụ haze na mmetụta ọjọọ ya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu nke ọma gbasara ọnọdụ ihu igwe a na nnukwu ọdịiche ya na alụlụụ na alụlụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Calima
Morningtụtụ ọma, ebe a na obodo m na-abụghị ụgbọ ala anaghịzị ebugharị dịka ọ dị na mbụ, enweghị ụsọ mmiri mana anwụrụ ọkụ na-agba, ọ bụghị igwe ojii ma ọ bụ alụlụụ, na mmiri zoo mmiri mana ọ na-aga n'ihu na-etolite ma ikuku adịghị
Zaghachi karen rodriguez
E kewapụrụ na Los Teques, Venezuela, ịnọ jụụ ezinụlọ, ụlọ m. Achọpụtara m na ọ bụ isiokwu magburu onwe ya nke mere ka m nwee ikeiche ọdịiche, ikuku na alụlụụ, nke ndị ha na-edoghị anya. Ekwadoro m isiokwu a n'ihi na ha kọwara ya n'ụzọ dị mfe. Ana m akwado ya.
Zaghachi Carmen Hernández
Obodo kachasị elu na Spain